विदेशबाट टेलिभिजन ल्याउँदा यस्तो छ एयरपोर्ट शुल्कको व्यवस्था - Everest Dainik - News from Nepal
विदेशबाट टेलिभिजन ल्याउँदा यस्तो छ एयरपोर्ट शुल्कको व्यवस्था
२०७६, १३ भाद्र शुक्रबार
काठमाडौं । विदेशबाट घर फर्किंदा टेलिभिजन ल्याउने सोच्दै हुनुहुन्छ ? त्यसो भए तपाईले भन्सारमा कति रकम तिर्नुपर्छ भनेर जान्नु जरुरी छ ।
नेपाल सरकारले ३२ इन्चसम्मको टेलिभिजनका लागि कुनै शुल्क नलिएपनि त्यो भन्दा ठूलो सेटका लागि भने शुल्क तिर्नुपर्छ ।
गत जेठ १५ मा आएको बजेटले टेलिभिजनको हकमा केही पनि व्यवस्था परिवर्तन गरेको छैन। सरकारले विदेशबाट फर्कदा नेपाली यात्रुले ल्याउने टेलिभिजनमा मूल्यको ५५ प्रतिशतसम्म समदर भन्सार महुशल असुल गर्ने गर्छ। यसबाहेक भन्सार शुल्क ५६५ रुपैयाँ लिने गरेको छ।
याे पनि पढ्नुस १८ वटा विमानस्थलको कमार्इ न्यून, खर्च जुटाउन प्राधिकरणलाई धौधौं
ट्याग्स: Airport Cost, Television
छुट्टाछुट्टै घटनामा ३ जनाको मृत्यु
चीनमा फेरि भेटियो घातक रोग
नेपालमा घट्यो सामसङ मोबाइलको मूल्य, अब कति ?
यी हुन् प्रचण्डसँगको वार्तामा ओली लचिलो भएका विषय
आफन्तले मृत्यु भयो भनेका व्यक्ति निको भएर घर फर्किएपछि…
‘प्रधानमन्त्रीको समर्थनमा २५ जनाले जुलुस लगाउँदा वेइज्जत भयो’